Ndị na-emepụta ọla nchara - China Metụtara Wire Loose & Factory
Pvc mkpuchi mkpuchi
Nkọwa: waya waya nwere PVC kpuchie ma ọ bụ Hot tinyekwara galvanized na PVC kpuchie. Ngwa: Ojiji kachasị ewu ewu maka eriri mkpuchi PVC dị na: yinye njikọ fences maka ogige nchebe ụlọ ọrụ, freeways na ogige tenis. Core Wire diamita Outer dayameta 0.5mm (bwg25) ~ 4.0mm (bwg8) 1.0mm (bwg19) ~ 5.0mm (bwg6) Tensile Ike: 30 ~ 55kgs / mm3Color: Green Green, Fresh Green, Black, White and Etc.Packing: N'ime 20 ~ 500kgs na eriri eriri na mpempe akwụkwọ wax ma ọ bụ eriri PVC…
Ngwa: emere dika ihe ndi ahia anyi choro tumadi eji akpo eriri ma obu ihe eji eke ya. Igwe izizi dị nro na-enye mgbanwe na nro dị mma site na nhazi ikuku nke ikuku oxygen. Assortment Waya dayameta ojii Annealed Soft Iron Wire 0.1mm (bwg36) ~ 5.1mm (bwg6) Bright Annealed Iron Waya 0.1mm (bwg36) ~ 5.1mm (bwg6) Tensile Ike: 30 ~ 55kgs / mm2Packing: Na ...
Nkọwa: Mgbanye Galvanized dị ọkụ bụ ngwaahịa izipu nke BESTAR. ọ na - agbakasị ụdị carbon karama dị ala. Nha ndị ha na-eme bụ site na 5 # ruo 36 #. Ndị ọzọ diamita dịkwa maka nhọrọ ndị ahịa. Igwe a na-eji mmiri ọkụ na-eme ka ọkụ dị obere site na waya dị nro dị ala, site na usoro ịbịaru waya, anneal, acid na-asacha, ịkpụ zinc, na-ajụkwa oyi ma mechaa. Ngwaọrụ a na-eji mmiri ọkụ galvanized na-ekpo ọkụ na ezigbo mgbanwe na nro. 2.) Electro Galvanized Wire bụ ...
Ihe ndị kwesịrị edo edo bụ galvanized ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara. A na-egosi ngwaahịa ọkọlọtọ nke tebụl dị n'elu, nkọwa pụrụ iche dị na arịrịọ. Nkọwapụta: Mpụga dayameta nke nke Igwe Ọdụdọ Ogologo kwa nkeji Akwụkwọ 450mm 33 8M CBT-65 Single mkpuchi 500mm 41 10M CBT-65 Single coil 700mm 41 10M CBT-65 Single co 960mm 53 13M CBT-65 Single coil 500mm 102 16M BTO -10.15.22 Udiri ụdị 600mm ...
Nkọwa: wiredọ waya ndị a kpụ n’ọnụ na-esite n’ụdị dị iche iche: Mịnịstrị waya, waya na-eji mmiri ọkụ galvanized na waya na igwe mkpuchi PVC. Ahụmahụ na waya barbed, eriri Sharp tumadi enye MOTTO Typedị Barbed Waya, PUMA Bardị Barbed Waya, IOWA Bardị Barbed Wire na Razor Bardị Barbed Wire na Concertina Bardị Barbed Wire Fire. AKPLKỌ: Barre Wires bụ ngwaahịa waya nke oke igwe eji eme ihe, ebe ha na-ekwe ka etinye ya n’elu ogwe waya maka obere ugbo na saịtị. Ekwentị Barbed ...